Samsung Neon - Kaaliyaha Virtual AI | TeraNews.net
qoraaga Nikitin Eugenius La daabacay 23.12.2020
Hagaag, ugu dambeyntiina, shirkadaha waaweyni waxay heleen waqti ay ku boodaan mustaqbalka. Looma yeeri karo si kale. Tikniyoolajiyadda cusub ee Samsung ee 'Neon' waa kaaliye dalxiis oo AI-ku shaqeeya. Xusuusnow filimada iyo ciyaaraha kombiyuutarka, halkaas oo sawirka qof karti u leh wadahadal khadka tooska ah uu ka muuqday muuqaalka miiska caawinta. Sumadda # 1 ee Kuuriya ayaa ku guuleysatay sameynta tikniyoolajiyaddan mid dhab ah. CES 2020, Samsung waxay soo bandhigtay shaqeynta mashruuca mustaqbalka.
RGB shaashadda LCD gadaal u iftiimiso. Acoustics Cool Hi-Fi. Mikrofoono tayo leh. Sawirka faraha faraha xasaasiga ah. Kuwani waa dhammaantood waxyaabaha yaryar ee soo saare kasta oo Shiinuhu fulin karo. Qaybta ugu weyn ee nidaamka Samsung Neon waa maskaxda. Ama halkii, sirdoon macmal ah oo si ku filan uga jawaabi kara dhammaan codsiyada isticmaalaha.
Oo halkan, soo-saareyaasha walaaca Kuuriyada Koonfureed waxay ku guuleysteen inay sameeyaan horumar farsamo. AI waxay awood u leedahay oo kaliya inay sii wadato wadahadalka lala yeesho wada-hadal ku saabsan mowduuc la xushay. Iyo wasakh, oo muujineysa muuqaalka wajiga qofka dhabta ah.
Waa maxay mustaqbalka Samsung Neon - maxaa loogu baahan yahay
Haddaan dib ugu laabanno asal ahaan (filimo iyo ciyaaro), markaa mashruucu wuxuu ku socdaa inuu ka mid noqdo hay'adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. Samsung Neon waa la-taliye buuxa oo awood u leh xallinta arrimaha adeegsadeyaasha. Waxyaabaha u gaarka ah mashruucani waa ku dayashada la xiriirka qof nool. Xiriirinta indhaha, marka laga eego aragtida cilmu-nafsiga, waxay kordhisaa dareenka iyo kalsoonida wada-hadalka.
Si aan shaki ku jirin, qaabdhismeedka sida bangiyada, hay'adaha maaliyadeed, shirkadaha adeegga bulshada, garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada tareenka ayaa u baahan hirgelinta Samsung Neon. Waxqabadka nidaamku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aqriso kaararka lacag bixinta, lacag bixiso. Samee ficilada qaarkood marka isticmaale lagu aqoonsado faraha. Fikraddu waa weyn tahay, sida fulintuna tahay. Wax walba hadda waxay kuxiran yihiin rabitaanka cuntada ee Samsung, oo ay tahay inuu ku dhawaaqo qiimaha abuuritaankiisa.
Farriinta WhatsApp farriinta macluumaadka Facebook?
XIAOMI Mi Power Bank 2 (5000mAh): dib u eegis
Muuqaalka Google Street: Khariidadaha Google ayaa qof walba ilaaliya
Gears 5: Sii wadista Gears of Dagaal saga
TOX 1 - TV-BOX-ka ugu wanaagsan ee ka hooseeya $ 50